local မှာ Movie site လုပ်ချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
13.1K အမျိုးအစား အားလုံး
449 Mobile Devlopment
208 other mobile
local မှာ Movie site လုပ်ချင်လို့
June 2010 edited July 2010 in Blog
ကျွန်တော် local network ထဲမှာ . .XAMPPlite နဲ့ Wordpress ကိုသုံးပီးတော့ စမ်းကြည့်ပါသေးတယ် . . .အဆင်မပြေလို့ပါ . . .ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာက http://www.rottentomatoes.com/ လိုမျိုး Movies နမူနာတွေကို . . .local မှာ site တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ချင်လို့ပါ . . ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ Movies Trailers တွေကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပီးတော့ . .locla မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ . .အင်တာနက်သုံးတဲ့ဖီလင်မျိုးလေးနဲ့ပေါ့ . ကျွန်တော့်စိတ်ကူးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ . .ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို သင်ပြပေးကြပါအုန်း . . .:rolleyes:
June 2010 edited June 2010 Administrators
movie က flv လား avi လား... flv ဆိုရင်တော့ flash player လိုပါတယ်။ wordpress မှာ flashplayer အတွက် plugin တွေ ရှိပါတယ်။
wordpress နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် video theme လေးတစ်ခုခုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ကတော့ HTML5 video နဲ့ selecta ဆိုတဲ့ theme ကိုသုံးထားပါတယ်။
ကိုစေတန်ကြီးခင်ဗျာ . . တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေသွားပါတယ် . . .ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် . .
ဒါနဲ့ . .နောက်ပီးတစ်ခုလောက်ထပ်မေးချင်လို့ပါ . .local ထဲမှာဆိုတော့ speed က 100 Mbps တောင်ဆိုတော့မှ IDM နဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲချသွားရင် အရမ်းမြန်နေမယ်နော် . .
အဲ့ဒီ Movies တွေကို ဒေါင်းတဲ့အခါမှာ5Mbps လောက်နဲ့ပဲရအောင်လုပ်လို့ရပါသလား . .အဆင်ပြေရင် ရှင်းပြပေးပါအုန်း . .
အဲဒါကတော့ server setup နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ဗျ... web ပိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး.. server ကို download limit သီးသန့် သတ်မှတ်ထားပေးမှရမယ်။
June 2010 edited June 2010 Moderators
ကိုမောင် wrote: »
သူများတကာတွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ကြတာကို ... အဟတ် ... အစ်ကို့မှ .. ဟီး ... အပြင်မှာသာ 100 Mbps ဆိုလို့ကတော့နော်... ဟင်းဟင်း
ဒေါင်းလုပ်တွေ အပ်လုပ်တွေ အကုန်လုပ်လိုက်မှာဗျ ... download limit ကိုသတ်မှတ်တာက ရပါတယ်... IDM မှာ limited ဆိုတာရှိတယ်..
IDM >> Download >> Speed Limiter >> Turn On လုပ်လိုက်ရင် 10 Kbps ထက်ပိုမဆွဲပါဘူးဗျ. ...
စမ်းကြည်ပေါ့နော်... အဲ့ဒါကတော့ သေချာတယ်ဗျ ... အဟတ်
IDM မှာ limited ဆိုတာရှိတယ်..
IDM >> Download >> Speed Limiter >> Turn On  လုပ်လိုက်ရင် 10 Kbps ထက်ပိုမဆွဲပါဘူးဗျ. ..
အဲဒါက IDM download ဆွဲတာကို limit လုပ်တာလေ... လူတိုင်း download ဆွဲတာကို limit လုပ်ချင်ရင်တော့ server ကနေ လုပ်မှပဲရမယ်..
ကိုစေတန်ကြီးခင်ဗျာ . . .မေးစရာလေးတွေထပ်ရှိပြန်ပီ . .မေးရမှာအားလည်းနာပါတယ် . .ရှက်လည်းရှက်သလိုပဲ . ..အခုလိုမမေးခင်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပီးတော့လုပ်ကြည့်ပါတယ် . .
အဆင်မပြေတဲ့အဆုံးမှ မေးတာပါ . .ဟီး . . stream video player ကိုသုံးတာကောင်းပါတယ် . .အဆင်မပြေတာက . .တချို့ flv တွေကရပီး တချို့ကမရပါဘူး . .အဲ့ဒါနဲ့ Mp4 နဲ့စမ်းကြည့်တော့ သူလည်း ရတဲ့ဟာရတယ် မရတဲ့ဟာလည်းမရပြန်ဘူး . .
ကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတာတွေက flv တွေများတယ်လေ ..အဲ့ဒါနဲ့ Viper's Video Quicktags နဲ့သုံးကြည့်တော့ သူကလုံး၀ကိုမရပြန်ဘူး . .wmv ကိုကျတော့ WP Media Player နဲ့စမ်းကြည့်တော့အဆင်ပြေပါတယ် . . .
နောက်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာက . .အခုလုပ်ထားတဲ့ wordpress ကို တခြားစက်ကနေလှမ်းခေါ်တဲ့အခါမှာ . .http://192.168.1.10/wordpress/ နဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာ . .ပွင့်တော့ပွင့်ပါတယ် . .
Theme အပြည့်အစုံနဲ့မဟုတ်ပဲ background အဖြူပေါ်မှာ စာလုံးတွေနဲ့ပဲပေါ်ပါတယ် . .အဲ့ဒီမှာ Home page ကိုနှိပ်လိုက်တော့ ..http://localhost/wordpress/ ဖြစ်သွားပီးတော့ ဘာမှမပေါ်တော့ပါဘူး . . .
ကျွန်တော်အခုသုံးထားတာက xampplite ပါ ကိုစေတန်က xampp ကိုညွန်းထားတာတော့ Thread တစ်ခုမှာဖတ်ဖူးပါတယ် . .
MP4 က iPod, iPhone တို့နဲ့ ကြည့်လို့ရအောင်ပါ။ flv တွေ မရဘူးဆိုတာက ဘယ်လိုမရတာလဲ။ flash player ပတ်လမ်းကြောင်းကို ဘယ်လိုပေးထားလဲ။ C:\_flv\_a.flv စတာမျိုးပေးရင် အဆင်ပြေချင်မှ ပြေလိမ့်မယ်။ http://localhost/myflv/a.flv လိုမျိုး ပေးပြီး စမ်းကြည့်ပါ။ online မှာ streaming အတွက် flv သို့မဟုတ် HTML5video သုံးလို့ရပါတယ်။ HTML5 video သုံးမယ်ဆိုရင် ogg နဲ့ mp4 version ၂ မျိုးလိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး flv လိပ်စာထည့်တဲ့အခါမှာ localhost နဲ့ထည့်ထားရင် IP နဲ့ ခေါ်တဲ့အခါမှာ ပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
http://192.168.1.10/wordpress/ ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ မပေါ်ရခြင်းက Setting မှာ Localhost ပေးထားခဲ့လို့ပါ။ Admin -> Setting -> General မှာ localhost အစား IP ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်ပါ။ video တွေကိုလည်း localhost အစား IP သုံးတာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ . .localhost နေရာမျာ IP ထည့်လိုက်တာ တခြားစက်ကနေခေါ်တဲ့အခါအဆင်ပြေသွားပါတယ် . . .
flv ကတော့ လောလောဆယ်အဆင်မပြေသေးဘူး . .လုံး၀မရတာမဟုတ်ပါဘူး . .တော်တော်များများရပါတယ် . .
မရတဲ့ဖိုင်တွေကျတော့ ဒီလိုပေါ်ပါတယ် ..
Video not found or access denied:
အဲ့ဒီလို ဖိုင်လည်းရှိရဲ့သားနဲ့ not found ဆိုပီးပေါ်တာပါ . .
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း တော်တော်များများလုပ်လို့ရနေပီ ကိုစေတန်ကြီးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် . .:cool:
file name တွေက space ပါနေလား။ အဲဒီ error က file name မှာ space ပါသွားလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
http://192.168.1.10/wordpress/wp-content/uploads/Trailers ပဲ ပြထားတယ်ဆိုကတည်းက file path ထည့်ထားတာ file name မပါဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ . . .file name ကဖြစ်နေတာ . .တရားခံကဒင်းကိုး . . .အဆင်ပြေမယ့် Plugin တွေရှာလိုက်ရတာ 10 ခုလောက်ရှိသွားတယ် . .တစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူး . . နောက်ဆုံးတော့ ဖိုင်နာမည်ပြောင်းလိုက်မှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ် . .
Trailers & Clips- Jonah Hex - Trailer ကို Jonah Hex ပြောင်းပီးလုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေသွားတယ် . .
ကျေးဇူးတင်ပီးရင်းကို တင်ပါတယ် . .တို့ အကိုကြီးရေ . .
@ Ko Maung ..
You can use YouTube Null Script for this purpose .. You can download the YouTube Clone from
I assume you have experience in this stuffs so I wont go details .. Pls read this article ..
youtube_premium_clone.rar က ဒေါင်းတော့ဒေါင်းပီးပီ . .ဒါပေသိမသုံးတက်ဘူး ..
တို့ အကိုကြီးရေ . .အခက်အခဲတစ်ခုထပ်တွေ့လို့ခင်ဗျ . . ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးသီချင်းကို HD ရှာပီးဒေါင်းတာ Shakira_-_Waka_Waka.vob ရတယ် . .200 MB လောက်ရှိတယ် . .. အဲ့ဒါကို Stream နဲ့သုံးလို့ရအောင် Xilisoft HD Video Converter6နဲ့ MP4 ပြောင်းလိုက်တယ် . ..ဖိုင်size က တော့လျှော့မသွားဘူး . . Stream မှာ ထည့်သုံးတော့ အသံပဲလာတယ် . .ရုပ်မပေါ်ဘူး . . အဲ့ဒါနဲ့ .. file name ကြောင့်လား . .size ကြောင့်လား ဆိုပီး လိုက်လုပ်ကြည့်သေးတယ် . .ရဘူးဗျ . . .
ကူညီပါအုန်းနော် . . .
.vob to .mp4 converter ကိုရှာပြီးတော့ သုံးကြည့်ပါလား ကိုမောင်ရ